Massimiliano Allegri Oo Si Dadban Maamulka Man United Ugu Qasbaya Iney Shaqada Ka Ceyriyaan Ole Gunnar Solskjaer. - Gool24.Net
October 9, 2019 Saed Balaleti
Tababare Massimiliano Allegri ayaa u muuqda mid maamulka Man United si dadban ugu qasbaya iney shaqada ka ceyriyaan xilli hore Ole Gunnar Solskjaer sida ay sheegayaan warbixinno ka imaanaya gudaha wadanka talyaaniga.
Macalinkaan shaqo la’aanta ah wuxuu ka mid yahay liiska macalimiinta aadka loola xiriirinayo kooxda Red Devlils maadaama uu cadaadis weyn saaran yahay Ole Gunnar oo kooxda fasalkaan bilowga ah ku hogaamiyay natiijooyin aad u xun.
Kulanka xiga ee Red Devils waxey la ciyaari doontaa Liverpool, waana hubaal 100% hadii ay natiijo xun la kulanto in macalinkaan laga qaadan doono go’aan shaqada looga ceyrinaayo, waxaana soo baxaya warar sheegaya in Max Allegri uu dalbanayo shaqada kooxdaan hadiiba loo dhiibayo wakhti hore.
Allegri oo shan sano oo xiriir ah u hogaamiyay horyaalka talyaaniga kooxda Juventus ayaa shaqo la’aan ah, kadib markii uu dhamaadkii fasalkii hore isaga dhaqaaqay magaalada Turin.
Gazzetta dello Sport ayaa ku warrameysa in Allegri uu doonayo hadiiba shaqada kooxdaan loo idmayo iney go’aan gaaraan maamulka wakhti hore, isla markaana uusan qaban doonin wax xil ah hadii wakhtiga uu sii socdo.
Sheekadaan waxey cadaadiska kusii badineysaa Ole Gunnar, maamulka Red Devils ayaana sidoo kale ka walaaci doona go’aanka ay qaadan doonaan maalmaha soo socda.